अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार यो बर्ष शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुग्ला त ? – ThePressNepal
अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार यो बर्ष शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुग्ला त ?
काठमाडौं जेठ १५ । गत बर्षको जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संसदको संयुक्त बैठकमार्फत आब २०७६-७७ बजेट प्रस्तुत गरे ।
राज्यको पुनर्संरचातपश्चात दोस्रो पटक अर्थमन्त्री खतिवडाले पेश गरेको बजेटमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यसवर्षको बजेट बढेको थियो । समग्र बजेट बृद्धि हुँदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा भने उलेख्य वृद्धि हुन सकेको थिएन । ७५-७६ आर्थिक बर्षमा १ खर्व ३४ अर्व ५० करोड ८७ लाख बजेट छुट्याइएकोमा गत बर्ष १ खर्व ६३ छुट्याइएको थियो ।
सामुदायिक विद्यालयको रुपान्तरण, साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने उद्देश्यसहित ल्यार्इएको बजेटमा विज्ञले भने आपत्ती प्रकट गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार शिक्षामा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याएमात्र शिक्षा क्षेत्र सुधार हुने उनीहरुको दावी छ । तर विज्ञहरुले शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत रकम पुर्‍याउनुपर्ने दावी गरिरहँदा अघिल्लो आर्थिक बर्षको खर्च रकम भने डरलाग्दो छ ।
७५-७६मा १ खर्व ३४ अर्व रकम विनियोजन भएको शिक्षा क्षेत्रमा पूँजीगत खर्चबाहेक करिब ४० अर्बमा खर्चमात्र खर्च भयो भने यो बर्षको हालत अझ भयावह छ । आव ७६-७७ को बजेटले शिक्षा विद्यालय भर्ना अभियान र ‘साक्षर नेपाल’लाई जोड दिएको थियो । प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने, मदनभण्डारी विश्वविद्यालय निर्माणलगायत पुरानै योजनाले निरन्तरता पाएका छन् ।
भने सबै छात्रालाई सेनेटरी प्याड उपलव्ध गराउन सरकारले बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर यो पकको बजेट विद्यार्थी तथा कक्षा कोठासम्म नपुगेका विद्यार्थीलाई वैकल्पिक शिक्षामा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने मुद्दामा केन्द्रित हुने अनुमान गरिएको छ ।
Tags: अन्तराष्ट्रिय बजेट शिक्षा
Previous केपी ओली गणतन्त्रको विरोधी भन्दै बामदेव गौतमले भने गिरिजा, माधव र प्रचण्ड गणतन्त्रको महानायक
Next विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व अध्यक्ष उज्वल थापाको उपचारको क्रममा लाग्ने सम्पुर्ण खर्च दुर्गा प्रसाईले ब्यहोर्ने